Monday,4Dec, 2017 1:53 PM
काठमाडौँ, १८ मंसिर, रासस – राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले महालेखा परीक्षकको कार्यालय भवनको आज अनामनगरमा शिलान्यास भएको छ ।
दश रोपनी १३ आना जमिनमध्ये सात रोपनी जमिनमा अत्याधुनिक साततल्ले भवन बन्नेछ । निजी निर्माण कम्पनी लुम्बिनी, गौरी पार्वती र शान्ति जेवीले आगामी तीन वर्षभित्र सो भवन निर्माण सम्पन्न गरी सक्ने गरी ठेक्का पाएका छन् ।
जमिनमुनि दुई र जमिनमाथि पाँचलले भवन मूल्य अभिवृद्धि कर, भ्याटबाहेक रु. ५४ करोड ३२ लाखमा निर्माण सम्पन्न हुनेछ ।
राष्ट्रपति भण्डारीले समारोहलाई सम्बोधन गर्दै आर्थिक अनुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अझ ध्यान दिनुपर्छ भन्नुभयो ।
उहाँले एकातर्फ विकास निर्माण विनियोजित बजेट खर्च नहुने अवस्था आउनु अर्कोतर्फ बेरुजु बढ्दै जाने स्थितिलाई अन्त्य गर्न आवश्यक रहेकामा जोड दिँदै संविधानले महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई निर्दिष्ट गरेका प्रावधानलाई कार्यान्वयन उतार्न आग्रह गर्नुभयो ।
सरकारी अनुदान प्राप्त संघ, संस्था तथा गैरसरकारी संस्थाका आर्थिक कारोबारलाई पनि चुस्त र दुरुस्त बनाउन सबैको ध्यान जानु जरुरी रहेको राष्ट्रपति भण्डारीले बताउनुभयो ।
सो अवसरमा महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालले भवन निर्माणका बारेमा जानकारी दिँदै सार्वजनिक निकायको वर्षेनी बेरुजु बढ्दै जाँदा हाल रु. चार अर्ब पुगेको बताउनुभयो ।
आफू महालेखा परीक्षकमा नियुक्ति भएपछि छ वर्षे कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको कार्ययोजनाअनुसार कार्यालयको आन्तरिक व्यवस्थापनमा सुधार गर्दै यस वर्षदेखि स्थानीय निकायको समेत लेखापरीक्षण शुरु भएको जानकारी दिनुभयो ।